के सेलिबेटीहरूलाई भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्न छुट छ ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
शुक्रवार, पुस १६ २०७८
बुधबार व्यवसायी डिकेस मलहोत्रा तथा मिस नेपाल २००९ विजेता जेनिसा मोक्तानले आफूहरूले दोस्रो सन्तानलाई जन्म दिन लागेकोमा पार्टी दिएर खुसीयाली साटेको भिडिओ युट्युब च्यानलमार्फत सार्वजनिक गरे ।
उक्त भिडिओमा उनीहरूले छोरीलाई नै लिएर अस्पतालमा गएर भ्रूण परीक्षण गराए र घरमा पार्टी राखेर गर्वको साथ दोस्रो सन्तानको रूपमा छोरालाई जन्म दिन लागेको कुरा सार्वजनिक गरे । उक्त पार्टीमा जेनिशाले गुलाबी (छोरीको प्रतिनिधित्व गर्ने) लुगा लगाएको थिइन् भने डिकेस मलहोत्राले निलो (छोराको प्रतिनिधित्व गर्ने) कपडा लगाएका थिए ।
उनीहरूले निलो कलरको बेलुन उडाएर आफूले छोरालाई जन्म दिन लागेको कुरा सार्वजनिक गरे । उक्त कार्य विदेशमा प्रायः गर्भस्थ बच्चाको लिङ्ग के छ भन्ने थाहा पाएपछि गरिन्छ । तर नेपालमा भने यस्ता कार्य गर्नुको कुनै तुक छैन किनभने नेपालमा भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्नु कानुनी अपराध हो ।
डिकेसले आफ्नो भ्लगमा सार्वजनिक गरेको २१ मिनेटको भिडिओमा भए जति सबै नाटक गर्न भ्याए । आफ्नो जेठो सन्तानलाई लिएर अस्पताल गएदेखि लिएर, त्यहाँ चेक गराएर घरमा आएर छोरा छ कि छोरी छ भनेर नाटकीय ढङ्गबाट गेमसम्म खेल्न भ्याए । उक्त भिडिओमा जेनिशाले नेपालमा भ्रुण पहिचान गर्न नदिए पनि हामीलाई जान्न मन लाग्यो र चेक गरायौँ भनेर हास्दै हास्दै भन्छिन्, मानौँ कि उनले निकै ठुलो कार्य गरिन् । उनीहरूलाई बच्चाको लिङ्ग पहिचान गराएर कपडा किन्ने हतार थियो । अमेरिकाबाट बच्चाको कपडा मगाउनु पर्ने भएकोले उनीहरूले भ्रुणको परीक्षण गराउनु जरुरी ठाने ।
नेपालमा भ्रूण परीक्षण गराएर छोरीलाई गर्भमै मार्ने कार्यहरू लुकिछुपी भइरहेको छ, जसलाई न्यूनीकरण तथा अन्त्य गर्न चुनौती थपिरहेको बेला सेलिब्रेटीले यस्तो कार्य गरेर उक्साउन मिल्छ ?
सन् १९८० को दशकमा पहिलो पटक गरिएको प्रजननसम्बन्धी विश्वव्यापी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा नेपाललाई छोरालाई उच्च प्राथमिकता दिने देशको रूपमा चिनाइएको थियो । समाज जतिसुकै शिक्षित र २१औँ शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्दा पनि छोरा नै चाहनेहरूको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।
अहिले पनि विवाहित महिलाहरूले छोरा जन्माउनु पर्ने दबाब तथा बाध्यताहरू सहँदै आएका छन् । आफूलाई शिक्षित, सभ्य, सम्भ्रान्त भन्न रुचाउनेहरूसमेतमा यस किसिमको मानसिकता पाइन्छ । यसैको उपज हो, लिङ्ग पहिचान गर्ने प्रवृत्ति । हुन त गर्भ रहेदेखि नै दम्पतीमा कौतुहलता हुन्छ, छोरा वा छोरी भन्ने । तर उनीहरू छोरा वा छोरी दुवैलाई समान रूपले स्वीकार्न भने तयार हुँदैनन् ।
लैङ्गिक विभेदविरुद्ध जतिसुकै चर्को आवाज उठाए पनि व्यवहारिक रूपमा ‘छोरा नै चाहिने मानसिकता’ हराएको छैन । त्यसैले त छोराको प्रतीक्षा गर्दागर्दै धेरै सन्तान जन्माउने, छोरी जन्माएको निहुँमा हेला-होचो गर्नेदेखि कन्या भ्रूण हत्या गर्नेसम्मको कृत्यहरू भित्र–भित्रै जारी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले पनि छोरा र छोरीबीचको समान अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । सन् २००२ मा नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यताप्राप्त गरेपछि गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गर्न तथा गराउन र त्यसको आधारमा गर्भपतन गराउनलाई पूर्ण रूपमा बन्देज लगाएको छ ।
नेपालमा गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्नु गैर कानुनी हो । तर यही गोरख धन्दा चलाएर छोरीको भ्रूणहत्या भइरहेको तितो यथार्थ हामीसामु छ । सामाजिक मान्यताको बलियो जरो र कानुनको फितलो प्रभावले सायद यो अपराध मौलाएको मान्न सकिन्छ ।
नेपालमा गर्भको लिङ्ग पहिचान गैर कानुनी भए पनि चर्चित सेलिबेटीहरूले नै यसलाई बढाबा दिइरहेका छन् । अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले आफू आमा हुन लागेको खबर सार्वजनिक गरेको केही समयपछि उनले आफू छोरीको आमा हुन लागेको खबर पनि सार्वजनिक गरिन् । त्यतिमात्र हैन, उनले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत छोरीको लागि लुगा किनेकोदेखि लिएर उनको लागि सजाएका कोठाहरूसमेत देखाउन भ्याइन् । उनको घरको नाम नै छोरीको नामबाट राखेको घोषणासमेत गर्न भ्याइन् ।
२०७८ साल असोज ६ गते उनले छोरीलाई नै जन्म दिइन् । उनलाई माया गर्ने फ्यान र उनको भ्लग रेगुलर हेर्नेहरू चकित बने । नेपालमा गर्भको लिङ्ग पहिचान गैर कानुनी भए पनि प्रियङ्काले भ्रूण पहिचान गराएको कुरा गोप्य राख्न नसकेकोमा विभिन्न टिकाटिप्पणीहरू भए । एकातिर सरकार लिङ्ग पहिचान नगर्न भन्छ भने अर्को तर्फ धेरैको ध्यान खिच्न सफल र जनचेतन जगाउनु पर्ने सेलिबेटीहरू भ्रम फैलाउँदै हिँडिरहेका छन् ।
लिङ्ग पहिचान गर्नुको पछाडि दम्पतीको खराब नियत वा कन्या भ्रूण हत्याको बढ्दो शृङ्खलाको कारण पनि यसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छैन । त्यसैले भिडियो एक्स रे अर्थात् अल्ट्रासाउन्ड गरेर लिङ्ग पहिचान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । लिङ्ग पहिचान गराउनु हुँदैन भनेर जनचेतना जगाउनु पर्ने सेलिबेटीहरु आफैँ लिङ्ग पहिचान गराएर गर्भवती भएसँगै छोरीको आमा बन्दै छु भनेर सार्वजनिक गरेपछि अरूले के सिक्ने ? प्रियङ्काले गर्दा हुने हामीले गर्दा नहुने भनेर प्रश्नहरू आउन सक्छन् ।
हाम्रो समाजमा छोरा जन्माएमा बूढ्यौलीमा आमाबुवाको सहारा बन्ने, मरेपछि काजकिरिया गर्ने तर छोरीले दिएको दागबत्ती, किरिया र पिण्ड नचल्ने साथै छोरीलाई पराईको दृष्टिकोणले हेर्नेजस्ता प्रवृत्तिहरू अझै विद्यमान छन् । छोरा नजन्माए दोस्रो विवाह गर्ने तथा हिंस्रक प्रकृतिका व्यवहार गर्नेजस्ता कु-प्रचलनहरू आजसम्म पनि पाइन्छन् । पछिल्लो दिनहरूमा छोरीहरू नै किरिया बसेका, बुबा आमाहरूको हेरचाह गरिरहेका र एउटामात्र छोरीमा चित्त बुझाउनेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गइरहेको छ ।
समाजमा यस्तो परिवार पनि छ, जो छोराको लालसामा गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान गराएर भ्रूण हत्या गर्ने अथवा गर्भपतन गराउँछ । कानुनी प्रावधानसमेत उल्लङ्घन गरी यस कार्यमा केही अस्पताल तथा क्लिनिकले भ्रूण हत्या गराउनमा मलजल पुर्‍याएका छन् । यिनै व्यवहारहरूले वास्तवमै ‘भ्रुणावस्थादेखि नै लैङ्गिक विभेद’ सुरु हुने पुष्टि गर्छन् ।
तसर्थ, कस्तो नियतले गर्भपतन गराउन लागेको हो भन्ने कुरा पहिचान गर्नुपर्छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने कुनै त्यस्ता अस्पतालदेखि लिएर सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थाहरूलाई समेत अनुसन्धान र सूक्ष्म निगरानीको घेरामा राखेर कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
प्रियङ्का कार्कीले सुरुबाट नै छोरी जन्माउने कुराको खुलासा गरे पनि ऋचा शर्माले भने बच्चालाई जन्मदिनु भन्दा केही दिनअगाडि आफ्नो युट्युव च्यानलबाट छोराको आमा बन्न लागेको सार्वजनिक गरेको थिइन् ।
सन्तानै नहुनेलाई छोरा वा छोरी जे भए पनि सन्तान जन्माउने रहर हुनु, छोरामात्र हुनेलाई एउटा भए पनि छोरी जन्माउने रहर हुनु र छोरीमात्र जन्माउने दम्पतीलाई एउटा भए पनि छोराको रहर हुनु एकपक्षीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा ठिक हुन सक्ला । तर छोरा पाउने लालसामा धेरै सन्तान जन्माउने साथै गर्भमा रहेको भ्रूण पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गराउने कार्य गलत हो ।
यस्तो कार्यले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र बच्चाको मौलिक अधिकार हनन् भएकोसमेत स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रका गहनाका रूपमा परिचित कलाकारहरूले यस्ता कार्यहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु कतिको जायज होला ?
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार कसैले गर्भमा रहेको भ्रूणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै कार्य गर्न वा गराउने कार्यलाई अपराध मानिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्थामा लिङ्ग पहिचान गर्ने र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउन जाने गरेको उदाहरणहरू व्यापक छन् ।
पछिल्लो समयमा पहिलो गर्भ छोरी भएका दम्पतीहरूले दोस्रो गर्भको लिङ्ग पहिचान गर्ने, छोरी भएमा गर्भपतन गराउने वा छोरा भए निरन्तरता दिने क्रम बढ्दो छ । गरिब, निमुखा तथा कमजोर वर्गका लागि यो नौलो भए पनि धनी र बौद्धिक वर्गका लागि यो सामान्य भइसकेको छ । अल्ट्रासाउन्ड गरेर लिङ्ग पहिचान गर्ने र गर्भपतन गराउन चाहना राख्ने धेरै हुन्छन् ।
यिनै सेलिबेटीको सिको गर्दै भ्रुण परीक्षण गराउनेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढ्न थालेको छ । यिनीहरू त केवल प्रतिनिधि पात्रहरूमात्र हुन् । नेपालमा पनि गर्भवती महिला सात–आठ महिना पुगेपछि परिवारका सदस्यबीच दही–चिउरा खाने चलन पुरानै हो । तर त्यही गर्भोत्सव संस्कारले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘बेबी सावर’ उत्सवको नाम पाएको छ । तर सेलिब्रेटीहरूले त उक्त उत्सव बच्चा पेटमा बसेको १६ हप्तापछि लिङ्ग परीक्षण गरेर मनाउन थालिसकेका छन् ।
जागिरे दम्पतीहरू समय मिलाएर सन्तान जन्माउन चाहन्छन्, तर त्यो सन्तान छोरा नै हुनुपर्ने सोच बनाउँछन् ।अनि लिङ्ग पहिचान र गर्भपतनका लागि जायज वा नाजायज मार्ग खोज्ने गर्छन् । त्यसैले यस किसिमको गर्भपतन स्वास्थ्यभन्दा पनि सामाजिक समस्या भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले पनि भ्रूण पहिचान गरेर पारिवारिक दबाबमा परेर गर्भपतन गर्न बाध्य हुने परिवारहरूलाई टेवा दिन जरुरी छ ।
युएनएफपिए ले २०२१ मा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा जन्मँदाको लिङ्ग अनुपात असन्तुलन देखिएको छ । घट्दो प्रजनन दर, लिङ्ग पहिचान प्रविधिमा सहज पहुँच र छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारले गर्दा असन्तुलन देखिएको उक्त सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शुक्रवार, पुस १६ २०७८ ११:४२:३९
नेताहरू गतिलो नहुँदा मुलुकको दुर्गति